तपाइँको दिनचर्या कस्तो छ ? - SatyaPatrika
तपाइँको दिनचर्या कस्तो छ ?
२०७८ पुष ३, शनिबार प्रकाशित
हरेक प्राणीलाई अन्न अर्थात् खानेकुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सामान्यतया अन्न वा खानेकुराबिना बाँच्न गाह्रो पर्छ । त्यसैले अन्नका लागि मूलतः खेतीपाती गर्ने किसानको महिमा पनि अपरम्पार छ । खानेकुरा निर्माण गर्ने सबैको प्रशंसा गर्नुपर्छ ।
अन्नको महिमाका बारेमा ईशादि दस उपनिषद् ग्रन्थमा यस्तो विचार पाइन्छ
इन्द्रिय र मन चल्नका लागि अन्न अनिवार्य छ । अन्नबाट शरीरादिमा रहने सामथ्र्य उत्पन्न हुन्छ, त्यो सामथ्र्य केका लागि हो भन्दा तपः अर्थात् तपस्याका लागि । तपस्यापछि मन्त्रको, किनभने आदि ऋषि ब्रह्माजी या अन्य ऋषिहरूले पनि तीव्र तपस्यापछि नै मन्त्र प्राप्त गरेका हुन् । मन्त्रद्वारा नै कर्मको विस्तार हुन्छ । कर्म गरेपछि त्यसको फलका रूपमा स्वर्गादि अनेक लोकहरू मिल्दछन् । ती–ती लोकअनुसारका जीवका पृथक् परिचय या नामहरू हुन्छन् । यसरी समष्टि संसार नै सोह्र कलाभित्र समाविष्ट छ ९अनु। रामानन्द गिरि० ।
यसरी हेर्दा अन्नको महत्त्व र त्यसको प्रभाव राम्ररी बुझ्न सकिन्छ । हाम्रा प्राचीन धर्मग्रन्थहरू तथा अन्य ग्रन्थहरूमा पनि अन्नको महिमा गान गरिएको पाइन्छ । हाम्रै अनुभवमा पनि यसको महिमा र महत्त्व कति छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
उपनिषद्ले आहारलाई अन्न भनेको छ र ‘अन्नं ब्रह्मेति व्याजानात्’ अर्थात् अन्नलाई ब्रह्म भनेको छ । खाइने वस्तु भएकाले अन्न भनिएको हो भने जीवन बचाउने मूल आधार भएकाले ब्रह्म भनिएको हो । यस अर्थमा भन्नुपर्दा हावा, पानी, माटो, रूखबिरुवा, वनस्पति, पशुपन्छी, कीटपतङ्ग आदि सबै नै एकअर्काका अन्न हुन् र अन्न भएको नाताले ब्रह्म पनि हुन् कमल रिजाल ।
नेपाली बृहत् शब्दकोशमा भने अन्नलाई धान, मकै, गहुँ, कोदो आदि खाद्यवस्तुका गेडा भनी अथ्र्याइएको पाइन्छ ९२०७५ स् ५०० । अन्नको महिमालाई वेदहरूमा पनि निकै महŒवका साथ प्रस्तुत गरिएको छ । शरीरको पोषक पदार्थ अन्न भएकाले अन्न प्राप्तिका लागि सामवेदमा यस्तो प्रार्थना गरिएको छ स्
हे अग्निदेव १ तिमी सबैका मित्र हौ । अन्न र तेजका अधिपति हौ । हे अग्निदेव १ तिमी सर्वद्रष्टा हौ, पोषक पदार्थले हामीलाई पुष्ट बनाऊ ९अनु। तिलकप्रसाद लुइँटेल० ।
हामी प्रत्येक दिन बिहान उठ्नासाथ चिन्तन गर्दै होइन कि चिन्ता गर्दै अगाडि बढ्छौँ । हुन पनि हो राम्रोभन्दा धेरै नराम्रो आइलाग्छ । राम्राभन्दा बढी नराम्रा कुरा सुनाइन्छन् । आशाभन्दा निराशाले घेर्छ । प्रशंसाभन्दा बढी आलोचना र त्रुटिले हामीलाई झटारो हानेका हुन्छन् । स्वार्थी र स्वार्थले घेरिएका हामी विचलित हुन्छौँ । समस्या जटिल बन्दै गएपछि जे खाए पनि जसरी पनि केही फाइदा हुँदैन ।
हामीले यस्तो परिस्थितिको सामना गरौँ । सके सहने गरौँ, नसके विकल्प खोजौँ । त्यो पनि सकिँदैन भने समयलाई पर्खौं । सकारात्मक बनौँ । आफूले गरेका केही न केही राम्रा कुरा र प्रगतिका पक्षमा रमाउन सिकौँ । स्वार्थी मानिससँग वास्तविकता नखोलौँ । इष्र्यालुसँग प्रगतिका कुरा नगरौँ ।
प्रत्येक दिन बिहान उठ्नासाथ ध्यान गरौँ थोरै समय । बानी छ र विश्वास लाग्छ भने ओछ्यानमै बसेर दुई हात हेर्दै तलको श्लोक पढौँ स्
कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती ।
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम् ।।
औँला अगाडि छन् लक्ष्मी हत्केलामा सरस्वती ।
फेदमा बस्दछन् ब्रह्मा बिहान हात हेर्दछु ।।
अनुवाद– ज्ञाननिष्ठ ज्ञवाली
त्यसपछि बिस्तारै उठेर ओछ्यानबाट तल ओर्लेपछि नित्यकर्म अर्थात् बिहानको सामान्य कर्मपछि सफा भएर आफ्नो शरीरको स्वभाव वा उमेरअनुसार एक वा दुई वा तीन गिलास मनतातो पानी पिउनुहोस् । यसले तपाईंको पेटको रोग निको हुन्छ भने रोग नभएमा रोग लाग्दैन । कब्जियत हुँदैन । पेट राम्ररी सफा हुन्छ । यो मेरै अनुभव हो ।
अब एक पटक फेरि माथिको श्लोकको भावार्थ केही विस्तार गरौँ र अगाडि बढौँ । हामी धनलाई लक्ष्मीको प्रतीक मान्छौँ । त्यसैले हाम्रा हात परिश्रमी भएमा हामी धन कमाउन सक्छौँ । हामी विद्या आर्जन गर्न हातका सहायताले परिश्रम गर्छौं । सरस्वती विद्याकी प्रतीक हुन् । हामी कसरी यो सृष्टिमा सुरक्षित रहने यो पनि हाम्रै हातका माध्यमबाट सक्छौँ । जहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्माको वास हुने विश्वास गरिन्छ । यिनै कारण हामी हात हेरेर बिहानको सुरुवात गर्छौं ।
यसरी अगाडि बढ्दै जाँदा हाम्रो नित्यकर्म सकिएपछि फेरि के खाने रु कसरी खाने भनेर हाम्रो मन तुलबुलाउन थाल्दछ । हामी धेरैले चिया, कफी खान्छौँ ९नेपाली भाषामा खान्छौँ नै चल्छ० । त्यो पनि धेरै चियापत्ती, दूध र चिनीसमेत राखेर । यसो गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो बन्दैन । क्षणिक वा केही समय, केही वर्ष आनन्द प्राप्त भए पनि समयक्रममा यसले हामीलाई हानि नै गर्छ । यस सन्दर्भमा तलको विचार मननीय छ स्
चिया तथा कफीहरू अत्यधिक मात्रामा खान सल्लाह दिँदैनन् वैज्ञानिकहरू । किनभने यिनीहरूले पनि धेरै रोगलाई आफूसँग ल्याउँछन् । यिनीहरूको धेरै मात्रामा सेवनले हाम्रो निद्रा कम हुन्छ, भोक लाग्न कम हुँदै जान्छ, एसिडिटी तथा अल्सर आदि रोग देखा पर्न थाल्दछन् । यिनीहरूको अत्यधिक सेवनले हाम्रो नाडी व्यवस्थालाई पनि नकारात्मक असर पर्दछ ९रामबाबु खनाल० । बिहानको समयमा पानी पिउने बानी राम्रो मानिएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा यसो भनिएको छ स्
ब्युँझिएर केही क्षणको प्रार्थनापश्चात् पानी पिउने बानी अत्यन्त लाभकारी मानिन्छ । महान् आयुर्वेदज्ञ राजीव दीक्षितको भनाइअनुसार बिहान उठेपछिको पहिलो कर्म उषापान हुनुपर्छ । उहाँको शोधमा आधारित भनाइअनुसार उषापान गर्दा मुख कुल्ला नगरीकन मुखमा रातभरि निर्माण भएको मुखको ¥याल पानीसँगै निल्नुपर्छ । त्यसलाई एकथोपा पनि खेर जान दिनुहुँदैन । रात्रिकालमा मुखभित्र स्रावित भएको ¥याल औषधीय गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । पाचन प्रणालीका अनेक किसिमका रोगव्याधिमा यसले गजबको असर पार्छ । पुनः एक पटक याद रहोस् कि यो दाँत माझ्नु, शौचालय जानुअगावै गर्नुपर्ने कृत्य हो ९राजु अधिकारी० ।
माथिको भनाइअनुसार कतिपय व्यक्तिले त्यसरी पानी खान नसक्ने पनि हुन सक्छ । दाँत माझ्ने सन्दर्भलाई हेर्दा त यसमा बिहान दाँत माझ्ने कुरा आयो । मेरा अनुभवमा भन्ने हो भने अघिल्लो दिन साँझ खाना खाएपछि दाँत माझेर सुत्नुपर्छ । बिहान एक पटक सफा मनतातो पानीले सामान्य कुल्ला गरेर पानी खाएमा अझ बढी उपयुक्त हुने देखिन्छ । आममानिसले साँझ खाना खाएपछि दाँत नमाझी सुत्ने र बिहान उठेर दाँत माझ्ने गर्दछन् । यो सर्वथा गलत हो । यसले केही फाइदा हुँदैन ।
यस सन्दर्भमा प्रस्तुत विचार निकै सान्दर्भिक देखिन्छ स्
चिनी खाँदा गुलियो लाग्छ तर मुखमा धेरैबेर चिनी राखिराख्दा चिनी तीतो हुन थाल्छ किनभने गुलियो वस्तु धेरै खाइरहँदा त्यो गुलियो वस्तु दाँतको कुनाकाप्चामा अड्किरहन्छ । दाँतको कुनाकाप्चामा धेरै बेर रहेपछि त्यो अमिलो बन्दछ । यसरी गुलियोबाट बनेको अमिलोले पनि इनामेललाई खुइल्याउँछ र गुलियो वस्तु धेरै खाइरहनाले दाँतमा अमिलो बनिरहन्छ । यसप्रकार हरबखत दाँतमा अमिलो भइरहनाले त्यहाँ नयाँ इनामेल बन्न पाउँदैन । त्यसैले दाँतको एकरदुई ठाउँबाट इनामेल हट्छ र त्यसबाट दाँतको भित्री नरम भाग देखा पर्दछ । त्यहीँबाट पछि कीटाणु भित्र पस्दछन् । यी कीटाणुहरूले दाँतलाई बिगार्ने काम गर्दछन् ९तीर्थबहादुर श्रेष्ठ० । यसैले खाना खाएपछि दाँत माझ्नैपर्छ । सामान्यतया बिहान ९ बजे खाना खाने समय मिल्छ भने खासै केही अरू खानुपर्दैन । यदि अफिस बिहानको, पढाइ बिहानको वा अन्य कुनै कार्य बिहानको छ भने केही न केही नास्ता, खाना, अर्नी वा ब्रेकफास्ट खाएर जानुपर्छ ।
खाने समय जुरेन भने पनि समय मिलाएर कुनै बेला बिहानै पनि खानैपर्छ । खानका लागि समय मिलाएन भने रोगले साथी बनाउँछ । रोग लागेपछि धेरै फुर्सद पाएर केही फाइदा हुँदैन । यसको मतलब लामो समय पेट खाली पारेर बस्नु हुँदैन । खानेकुरा आफ्नो शरीरअनुसार मिलाएर खानु राम्रो हुन्छ । के खाँदा ठीक हुन्छ, सहज हुन्छ त्यही खानेकुरा खानुपर्छ ।
टिकटकमा भिडियो भाइरल बनेपछि अमेरिकाका विद्यालय बन्द
कर्णाली प्रदेशमा हिमपातको सम्भावना